Dybala iyo Mandzukic oo shaki laga muujinayo kulanka habeen dambe ee Napoli – Gool FM
Byare April 1, 2017
(Italy) 01 Abriil 2017. Weeraryahannada kooxda Juventus Paulo Dybala iyo Mario Mandzukic ayaa shaki laga muujinayaa kulanka habeen dambe ay la yeelan doonaan Napoli ciyaar ka tirsan horyaalka Serie A.
Dybala ayaa la dhibtoonaya dhaawac muruqa ah kaa oo ka soo gaaray kulankii ugu dambeeyay ay Juventus ciyaarto ka hor inta aan la aadin kulamada caalamiga ah, laakiin saas ay tahay waxaa lagu daray shaxda xulka Argentina.
Kama soo muuqan kulankii dhawaa uu xulka Argentina guul darada kala soo kulmay Bolivia isreeb reebka koobka adduunka iyadoo ay jirtay inuu xulka ka ganaaxnaa Lionel Messi.
Mandzukic ayaa isna dhaawac uu qabo dartii lagu qasbay inuu si gooni ah tababarka u sameeyo waxaana jirta inuu seegay kulankii saaxiibtinimo uu xulkiisa Croatia la yeeshay Estonia.
“Mandzukic si gooni ah ayuu u shaqeeyay, Dybala isna qeyb ayuu tababarka la sameeyay kooxda qeybna si gooni ah,” Tababare Allegri ayaa sidaa saxaafadda u sheegay ka hor kulanka habeen dambe.
“Dybala wuxuu sameeyay tababar yar laakiin xaalad fiican kuma jiro. Waa inaan qiimeeya aana go’aan ka gaaraa.
“Haddii uusan Dybala ciyaarin, kuwa kale ayaa diyaar u ah inay si fiican sameeyaan.
“Mandzukic wuxuu qabaa dhibaato jilibka ah, waan ka fikiri doonaa maanta.
“Weli ma dooran safka rasmiga ah, tababarka kaddib waxaan heli doonaa fikrado badan oo cad cad.”.
Luke Shaw oo la ogaaday inuu seegayo kulanka West Brom iyo sababta oo la shaaciyay